नेपाल टेलिकमको सोधपुछ तथा गुनासो व्यवस्थापन गर्न अब ४ वटा नम्बर, कुन नम्बर केका लागि ? – सुनाखरी न्युज
नेपाल टेलिकमको सोधपुछ तथा गुनासो व्यवस्थापन गर्न अब ४ वटा नम्बर, कुन नम्बर केका लागि ?
Posted on: April 8, 2021 - 9:28 am
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ -नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका बारेमा जानकारी लिन तथा गुनासाहरु राख्नका लागि विभिन्न नम्बरहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको १९१, १९७, १९८ र १४९८ नम्बरहरु कम्पनीद्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाहरुका बारेमा बुझ्न र गुनासा टिपाउन धेरै नै उपयोगी बनेको टेलिकमले दावी गरेको छ । सोधपुछ तथा गुनासा व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिएका यी नम्बरहरु ग्राहककै सहजताका लागि निःशुल्क गरिएका छन् ।